टेक्नोलोजी कसरी ईन्जिनियरि Industry उद्योग परिवर्तन गर्दै छ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
8 सक्छ, 20216सक्छ, 2021 म्याकेन्जी जोन्स ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार
भर्चुअल वास्तविकताले डिजाइनलाई पूरै नयाँ तहमा पुर्‍याएको छ। अब डिजाइनरहरू उनीहरूको संरचनाहरू मार्फत डिजिटली हिड्न सक्छन् उनीहरूले निर्माण सुरु गर्नु अघि।
लेजरहरूले मापन पहिले भन्दा बढी सही बनाएका छन्। यसको मतलव त्यहाँ गल्तीहरूमा कम खर्च गरिएको छ, र हाम्रो संरचनाहरू अझ जटिल हुन सक्दछ किनकि हाम्रो शुद्धतामा सुधार हुन्छ।
खुला स्रोत डाटा ट्रेंडहरूले ज्ञान र सफ्टवेयर सबै अनलाइनका लागि सजिलै उपलब्ध गराएको छ। यसको मतलब यो हो कि टेक्निक दुनियामा नवीनता निरन्तर भइरहेको छ।
एक ईन्जिनियर एक असाधारण सोच प्रक्रिया संग एक व्यक्ति हो। तिनीहरू आवश्यकतालाई हेर्छन् र उपकरण पत्ता लगाउँदछन्। तिनीहरू पनि उपकरणमा हेर्न र यसलाई राम्रो बनाउन वा अर्को सेटि inमा यसलाई प्रयोग गर्न अनुकूलन पत्ता लगाउन सक्दछन्। ईन्जिनियरहरूले पनि कुनै चीजबाट उत्कृष्ट विचारहरू सिर्जना गर्न सक्दछन्। विचारहरूलाई दृश्यमान फर्ममा राख्ने शक्ति लामो समयदेखि ईन्जिनियरिंगको महत्वपूर्ण फार्म हो, तर प्रदर्शन परिवर्तन भएको छ।
भर्चुअल रियलिटीले विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, के गलत भयो भनेर समीक्षा गर्नुको सट्टा वा डिजाइन चरणहरूको अन्तिम श्रृंखला डम्पि .को सट्टा।
रेखाचित्र बोर्ड अब एक हेलमेट हो
जब एक ईञ्जिनियर वा डिजाइनरसँग राम्रो विचार हुन्छ जुन उनीहरूले सोचे जति प्रभावकारी थिएनन्, तिनीहरू ड्रइ board बोर्डमा फर्किए र या त शुरू भयो वा फेरि केही चरणहरू सुरू गरे। भर्चुअल रियलिटी टुल्सको मतलब ईन्जिनियरहरूले अब हेलमेटमा राख्न सक्दछन्, उनीहरूको भर्खरको सिर्जना ल्याउन र परिवर्तनहरू सुरू गर्न सक्दछन्।
एक रेखांकन सिर्जनाकर्ता जस्तै ईन्जिनियरको लागि, यस द्रुत क्षमताले पुरानो डिजाइनमा परिवर्तन गर्न यसले मानसिक रीसेटको लागि लिने समयलाई धेरै कम गर्दछ। भर्चुअल रियलिटीले विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, के गलत भयो भनेर समीक्षा गर्नुको सट्टा वा डिजाइन चरणहरूको अन्तिम श्रृंखला डम्पि .को सट्टा। भर्चुअल रियलिटीमा डिजाईन गर्ने क्षमताको अर्थ विस्तार गर्ने र समस्याहरूको खोजी गर्ने मौका, कमिलाई सच्याउनको लागि विस्तार गर्न, वा कम्पोन्ट डाउन कम्पोनेन्टहरू जुन अब उपरान्त सेवा गर्दैनन्।
लेजर मार्फत Digitization
टबमा आर्किमिडीजहरू जस्तै, ईन्जिनियरहरूले प्रायः सतहहरू हुन्छन् जुन तिनीहरू सजिलैसँग र / वा सुरक्षित रूपमा मापन गर्न सक्दैनन्। यदि तिनीहरूले एक भवनमा थप्न वा मर्मत गर्न आवश्यक छ, उदाहरणका लागि, र एफएडेड सपाट छैन भने, भौतिक लागत, डिजाइन समय, र श्रम सुरक्षा सबै सही मापन बिना संदिग्ध हुनेछ।
भाग्यवस, क्षमता लिथियम ट्राई बोरेट (LBO) क्रिस्टल किन्नुहोस् र धेरै पटक प्रकाश फोकस गर्नुहोस् लेजर सिर्जना गर्न जुन चरम सटीकताको साथ आयामहरू पढ्न सक्दछ यसको मतलब ती मापनहरू सुरक्षित रूपमा लिन सकिन्छ। HVAC प्रणालीहरूबाट एक संगमरमर फçएडको लागि सिलेन्टमा सही उपाय प्राप्त गर्न, डिजिटल मापन उपकरण र लेजर टेक्नोलोजीमा पहुँचले डिजाइन चुनौतीको जोखिम कम गर्दछ।
बजारमा उत्पाद निगरानीको लागि विकल्पहरू
प्राय: नयाँ वा अपग्रेड गरिएका उत्पादनहरूका लागि उत्तम विचारहरू ग्राहकहरूबाट आउँदछन्। यी सुधारहरूको पहिलो प्रदायक हुन, क्षमता ट्र्याक ग्राहक प्रयोग र सन्तुष्टि आलोचनात्मक हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ एक टेक्नोलोजी सिर्जना गर्नुहुन्छ जुन एक रकर स्विचमा कार्य गर्दछ, कति पटक स्विच बम्प हुन्छ वा रिसेट हुन्छ? गाडीमा कुन “सजिलो पहुँच” को रूपमा लिइन्छ, र साइकल चालकलाई तिनीहरूको हेलमेटमा उनीहरूको फोनको उत्तर दिनको लागि तपाईले बटन कहाँ राख्नु पर्छ? खुशीका ग्राहकहरु महान बजार उपकरणहरु हुन्। दुखी ग्राहकहरूले सांस्कृतिक मजाकमा उत्पादन परिवर्तन गर्न सक्दछन्।
उदाहरण को लागी, एक बिन्दु मा स्वत: काँध बेल्ट एक आदर्श डिजाइन विकल्प को रूप मा देखा पर्‍यो। यसले ड्राइभरको आवश्यकतालाई घटायो यदि उनीहरूले आफ्नो सीट बेल्ट लगाउन आवश्यक छ भने। यद्यपि, अभ्यासमा, यो लाग्न सक्ने उपयोगी उपकरण लोकप्रिय थिएन, र केही केसहरूमा पूर्णतया खतरनाक थियो। अटोमोटिव डिजाइनर र ईन्जिनियरहरू मात्र कति चालकहरू चिच्याए भनेर जान्दछन्, पेची up, वा आफ्नो फास्ट फूड पेय पदार्थ स्वचालित बेल्ट को कारण फर्शमा दस्तक दिन पर्याप्त कठिन बम्प, तिनीहरूले धेरै चाँडो बाहिर चरण गरिएको थियो।
ईन्जिनियरि ofको दुनिया मा क्लाउड को शक्ति छुट हुँदैन।
खुला स्रोत डेटा प्रवृत्ति
ईन्जिनियरि ofको दुनिया मा क्लाउड को शक्ति छुट हुँदैन। जब देखि हामीले गुँडमा भाँडो राख्ने सिक्यौं, सब भन्दा ठूलोदेखि माथिको माथिको सबैभन्दा सानो भागसम्म, मानव चीजहरूको लागि काम गर्ने इच्छा राख्दछ। हामी पनि अर्को अनुप्रयोगमा एक सेटिंग राम्रोसँग काम गर्ने चीजहरू बनाउन चाहान्छौं। क्लाउड कम्प्युटि via मार्फत विश्वभर विचारहरू साझेदारी गर्ने क्षमतालाई धन्यबाद, जानकारी साझेदारी आफैमा एक उद्योग हो।
क्लाउडमा डाटा साझेदारी गर्ने क्षमताले खुला स्रोत ईन्जिनियरि data डाटामा भाग लिने उत्साहजनक उद्योग बनाउँदछ। भित्र बढिरहेको खानाबाट अपार्टमेन्ट विन्डोज मdrop्गललाई हाइड्रोपोनिक बगैंचामा उपनिवेश गर्न, खुला स्रोत फोरमहरूमा योगदानकर्ताहरूले एक लक्ष्यमा ध्यान दिएर विभिन्न उद्योगहरूबाट विशेषज्ञता प्रदान गर्छन्। अरूको फाइदाको लागि सिर्जनामा ​​ध्यान केन्द्रित गरेर, हामी प्रत्येकले हाम्रो ईन्जिनियरिंग मांसपेशीहरू निर्माण गर्न सक्दछौं।
धेरै जसो हामी रचनात्मक सोच चीजको रूपमा हेर्छौं जुन चित्रकला वा मूर्तिकलामा लागु हुन्छ। जहाँसम्म, चीज सजिलै सिर्जना गर्ने वस्तु बनाउने क्षमता पनि रचनात्मक शक्ति हो। ईन्जिनियरहरूले जीवन सरल र सुरक्षित बनाउँदछ र प्रविधि गुणस्तर ईन्जिनियरि ofको पहुँच विस्तार गर्दछ।
व्यापार सांप्रदायिक समाचार ईन्जिनियरिङ् नवीनता प्रविधि